Musangano wevatori venhau Mark Rutte naHugo de Jonge: iyo imwe nehafu yemamita nzanga uye kusimudzirwa kwemapurogiramu: Martin Vrijland
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa 7 April 2020	• 12 Comments
Hongu zviripo! Isu tiripo. Munoona musangano wevatori venhau kubva kunaMark Rutte naHugo de Jonge pamatanho matsva eiyo coronavirus. Zvinoenda chaizvo sezvaitarisirwa. Ingotarisa izvo izvo vanhu vakangotengesa mune eakanaka wakakora mazwi. Izvi ndizvo zvatiri kuzowana:
Kunobva uye kusangana nekutsvaga kuburikidza neapps uye kuyera mhedzisiro. "Izvi zvinoreva kuti tinofanira kungwarira zvakanyanya nekuvanzika"Akadaro De Jonge, asi pamwe anga achitaurirana naGeorge Orwell"Tinofanirwa kushaisa zvakavanzika zvako nekuchenjera sezvinobvira, kuitira kuti iwe udzivise zvishoma sezvinobvira uye uzvione sekuda kwako".
Imwe app iripo kuti ipe vese vako vanotaura venguva yakapfuura chiratidzo "Uri kusangana nemunhu ane hutachiona"Uye"uri padhuze nemunhu anoita kunge ane hutachiona". Iyo imwe app inouya kubva kuRAVG yekukubatsira kuti uzviongorore uye urambe uchionana nachiremba. Zvakanaka, ini ndambofungidzira iyo yekutanga app on March 6 uye ini ndakapawo iyo yechipiri app on March 17.
Paunobvunzwa nevashori vanoshoropodza vatori venhau kubva kuruzhinji kuti haufanirwe kutyora zvakavanzika kuitira kuti ushandise zviwanikwa zvakadaro, Rutten naDe Jonge vanopindura kuti iwe unogona zvakare kuita izvi zvisina dura; semuenzaniso kuburikidza nebhuruu zino. Asi iyo database inoziva sei kuti ndiani ari munharaunda yako uye kana ivo "vane hutachiona"? Izvo zvinoda chaizvo kuti data igoverwe, handizvo here? Kunze kweizvozvo, izvi zvinotungamira kuchinhu chatinoziva kare kubva kunguva yeBhaibheri. Yakarembera senzira inoenda kuRoma: maperembudzi airambidzwa kubva munharaunda.
Haisiri nguva yekutora nhume zvakakomba here? Nhume iyo yakatofanotaura nezvematambudziko uye kudonha kwehupfumi muna 2019 mubhuku rake? Kana iwe unofarira kuteerera madhora mune sutu yakagadzirwa nesutu iyo iwe wakabhadhara, inozobvisa kwako kusununguka, asi woitora nhanho nhanho? Vagadziri vanoreva nhema panguva yemakwikwi esarudzo vanongoerekana vaita zvakanaka here?
Paakabvunzwa kana kushandiswa kweapp kunosungirwa, mhinduro yaDe Jonge ndeyekuti ichiri nguva yekutanga kuipindura (verenga: hatidi kuratidza nekukurumidza kuti isu tese tinoziva izvi kwenguva yakareba uye tinongoomerera uye tichizviita zvinosungirwa), asi panguva imwecheteyo nhanho yakapihwa kuti pakupedzisira ita kudaro.
Isu tiri kupupurira danho-nhanho chirongwa uye nekuzvizivisa zvakanaka uye zvakapfava, zvinounzwa se "hungwaru" kuvhurwa kwe "Intelligent kuvhara". Vanamai naanamai, munounzwa nhanho nhanho muchigadziriso chinounzwa kununurwa. Izvo zvakafanofungidzirwa chaizvo uye mune ino saiti kwemakore ichi chapfuura chinyorwa Ini ndinotsanangura nhanho nhanho kuti inoitwa sei. Ndokumbirawo kuti muverenge izvozvo zvakanyatsotarisirwa uye motarisa tarisa vhidhiyo pazasi iyo mauri kuona izvo zvakamirira iwe. Jeri risina mabara!
Iwe unodenha kuburikidza nekuparadzira kupaka kwevhidhiyo iyoyo? Iyo yeutongi hwemapurisa mamiriro ehurumende ayo anounzwa semhinduro yechinetso chinogamuchirwa zvisingaite. Asi vanhu vakaramba vachienda kumutsindo nekunyengera.
Kubva 'imwe nehafu yemamita' kusvika 'munharaunda yekuzvitsaura munharaunda' ... iyo yekutanga chinhambwe ichokwadi; kusiyiwa kunotevera. Pasina mapurogiramu, kuongororwa uye pakupedzisira kuve kwekudzivirira, kusabatanidzwa mukubatanidzwa munharaunda inotevera.
ChiShayina app inonyevera vanhu vane zvikwereti munharaunda yenyu
Alibaba app 'Hutano Code' muWuhan inobatsira ine coronavirus quarantine yenzvimbo
Tags: imwe nehafu, App, Apps, corona dambudziko, coronavirus, kudhara, Featured, Hugo Mudiki, intelligente, kukiya, Mark Rutte, mita, OLVG, press conference, sangano, mumagariro
8 April 2020 pa 08: 01
8 April 2020 pa 09: 33
Mudzidzi waQanon. Mukadzi uyu anoda kutiudza kuti hutachiona huchaita kuti nyika yakadzika uye makoko ese ezvematongerwo enyika arangwe. (Ona vhidhiyo yake yapfuura).
8 April 2020 pa 09: 35
Ini handinzwisisi kuti nei vanhu pano vachiramba vachiedza kunyengerera vaverengi mumusungo weQ Anon. Zvimise!
vivalarevolution akanyora kuti:
8 April 2020 pa 14: 27
Q ndeye goridhe (1984)
Chero ani zvake asingaone izvozvo akatonyanya kuchena kupfuura gwai rinenge richitevera Rutte.
meries akanyora kuti:
8 April 2020 pa 08: 17
Ehe, nyaya yakajeka. Makore mazhinji apfuura netsaona akaenda kuhurukuro naMarcel Messing 'tinomuka' uye ini ndinogara ndichinzwa kuti iyi inyaya yake, asi kuti ini handisi kuona meseji yake
Ndiri kunzwa kufamba kuri kuitwa. Ndiri kunzwa simba rakakura kupandukira 'zvine hungwaru' 😉. Ini zvino ndoziva chikamu che polarization. Isu tinofanirwa kutanga takatakura kurwadziwa kuti tinzwe zvatinoda chaizvo. Uye iyo kurwadziwa kwekusununguka kunoshamisa kune vazhinji. Saka hongu ita asi chip icho chandinoda kuti ndikwanise kuenda kuiyo yekupedzisira bhaisikopo (HERE).
Isu takavhiringidzika! Asi sekureva kwaMartin: isu chete hatina chiratidzo chekugona kwedu nesimba rehupenyu.
Gara kumashure, inzwa yako isingagumi uye shandisa iyo huori hwapasi sepasirodhi kune yako yekutanga tsika.
Mumwe murume anobva kumaodzanyemba kweNetherlands nemhuri yakanaka yechidiki. Kutarisa uye kubvunza kuburikidza nehupenyu.
8 April 2020 pa 09: 27
Iwo mapurisa euhushi anotonga aine 100% kutonga kwezviito zvewese. Zvino kuunzwa nehurumende yakanaka inongoda zvakanaka nevanhu uye inoda kutidzivirira. Vanhu vakarongedzwa nenzira yakadai nekutya, yakasimbisirwa-rusununguko rwendo rwekufamba zvakare inogamuchirwa nekuti yakaunzwa sekudikanwa uye nekudzivirirwa kwedu kuti ivo vanofarisisa nekuda kweiyi mhinduro (maapplication anotitarisisa) uye kunyangwe kana zvisiri zvinodiwa kuti gadzira pasina kuzeza uchaisa pakarepo.
Mushure mezvose, ndezvekudzivirira kwedu uye kunouya kubva kuhurumende yedu yakavimbika yakavimbika uye zvakanyanya kana isu tichiisa ivo tinogona kupedzisira tadzoka munzira (ivo vanofunga). Uye kuvanzika uye rusununguko rwematambudziko ekufambisa shure kwevakadzidza zvakanyorovera (telegraaf 08-04-2020) vakativimbisa kuti mapurogiramu akachengeteka zvakakwana, kuti zvese zvakaitwa kuti zvisakanganise kuvanzika kwedu.
Aya ndiwo matangire akaita kubuda kwehurongwa hweChinese nesu, hongu zvese nenzira yakapfava inoshoreka kutidzivirira. Izvi zvichaenda mberi uye mberi nekuti zvirokwazvo pachagara paine kutsva kwe corona kubuda (kana kumwe kubuda kwehutachiona). Uye zvinopera nekukurumidza kuti aya maapplication (uye mazhinji anotevera maapps anouya anotevera uye mimwe mitemo uye matekinoroji kuti atiise pasi pekutonga kwakazara) inogona kushandiswazve zvakanaka kunyatsochinja shanduko yemamiriro ekunze uye hunhu hwehuwandu hunodiwa kuitira shanduko yemamiriro ekunze. inogona kuongorora.
Uye izvi zvinosanganisirawo iyo inonziumamu dot digit tattoo iyo munhu wese ane ID2020 anogona kuteverwa. Iko kunogona kuoneka kana iwe wagamuchira inodiwa covid-19 yekudzivirira. Uye kumwe kutemera kuchazodiwa gare gare. iwe zvakare uchada iyi tattoo kana iwe uine bhizinesi kana uchida kuita bhizinesi nekuti munguva pfupi iyi tattoo inozodiwa kune ese matanho ekutengeserana.
Ini handingashamisike kuona iyo quantum dot tattoo ichibuda gore rino. Zvichida kwete zvekumanikidzwa pakutanga, asi nekuti iwe uchave uchiwedzerwa uye uchivimba nazvo, semuenzaniso kana uchida kufamba kuti utarise kana iwe uine zvese zvekudzivirira, kana iwe usina iyo tattoo unozongorambwa panzvimbo yekutarisa yetikiti kana ne-elektroniki cheki-mukati. Uye mune imwe nguva yakareba, nekuti dot inobatana nezvose zviri munharaunda, hauzokwanisi kuita pasina izvozvo.
Martin: zvinongouya chete ût know du sein unayo
8 April 2020 pa 11: 50
Utachiona hwe "hupenyu hunotyisidzira" hunogona ikozvino kutapurirwawo neyakaitwa chiitiko che "kutaura" futi nemunhu asina zviratidzo. Kutaura nezve kunyarara ... Ini ndoda kubuda pano!
8 April 2020 pa 13: 21
Chii chakamirira Netherlands:
8 April 2020 pa 20: 03
Well izvo Apps zvinouya kuti jpgberber vanofunga madhiri ePalantir nekuti iwe unofanirwa kudyisa mhuka yeAI uye iyo inogona kubatana nePredictive Policing (CAS) shoma manpower inoda yakawedzera tarisheni.
Thiel, Peter (USA), Mutungamiriri, Thiel Capital
Schmidt, Eric E. (USA), Vaimbova CEO uye Sachigaro, Google LLC
8 April 2020 pa 20: 05
10 April 2020 pa 14: 39
Zvekupamba zvakatotanga muSpain ... Kusvika nguvai Netherlands isati yatevera? Zvakanaka, izvo zvinogona kunge zviri kutoitika, asi kana vezvenhau vasingazviratidze, hatizozvione.
10 April 2020 pa 15: 23
Nakidzwa kunze kwekunze mune zvakasikwa. Izvo zvakanaka kune immune system yako. Kunyange zvichikwanisika zombie apocalypse isati yaputika. Mavairasi haana kutapurika nenzira ipi neipi sezvo kutya zvinonyadziriso kuita iwe kutenda. Bata faindi, ndiani achazombabhadhara zvakare?
« Corona Dambudziko: Zvinogona kutora kusvika pamakore maviri kusvika matatu kuti ubve kunze kwekuvhara kunze kwekutanga kwekutsvaga uye maapps
David Icke London Chairo yakafemerwa vhidhiyo: iri Icke ndeye chaiyo kana kuti fake kana ichokwadi chakasanganiswa neichovha chechisimba? »
Kushanya kwakazara: 2.653.446
SandinG op Femke Halsema inoita kuratidzira pasina mvumo yepamutemo & yeboka kugadzirwa uye 1,5 m yemagariro ekudzora isingadzoreke
Sunshine op Kufanotaura: Hondo yevagari vemuUS, mhirizhonga muEurope, kuparara kweNATO uye kusimuka kweTurkey (ASSAM)
Martin Vrijland op Kufanotaura: Hondo yevagari vemuUS, mhirizhonga muEurope, kuparara kweNATO uye kusimuka kweTurkey (ASSAM)